Madaxda dowladda, waxay dalka ku riixayaan kala-tag iyo fowdo” Cumar C/Rashiid” - Awdinle Online
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna Sanoter ka tirsan Xildhibaannada Aqalka Sare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ka digay in la joojiyo wada-hadallada ku saabsan xal ka gaarista Arrimaha doorashooyinka.
Qoraal uu soo dhigay Bartiisa twitter-ka ayaa waxaa uu ku sheegay in joojinta wada-hadallada ay horseedi karto xaalad hubaal la’aan ah oo uu dalka galo.
“Joojinta wadaxaajoodyada doorashooyinka waxay bulshada u horseedi doontaa xaalad hubaal la’aan ah, iyadoo su’aal la gelinayo mustaqbalka dalkeenna ayuu yiri” Sanoter Cumar Cabdirashiid.
Sidoo kale Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxaa uu sheegay in Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkeedu dhamaaday ay dalka ku riixayaan kala-tag iyo fowdo.
Hadalka Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna Sanoter Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli aan wax heshiis ah laga gaarin doorashada, isla markaana ay joogsadeen wada-hadalladii doorashooyinka.
Previous articleDEG DEG:-Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir oo xilkii laga qaaday
Next articleGolaha Shacabka oo loo qeybiyay qoraal ku saabsan muddo kordhin